Etu esi bulite foto na Instagram na Chrome | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi bulite foto na Instagram na Chrome
Chrome bụ ihe nchọgharị na-enye ndọtị na ọrụ ndị ọzọ na-enweghị itinye ngwa, mana obere ndọtị na-enye anyị ohere ịbawanye ike nke kọmputa anyị na-enweghị iji jupụta ya na mkpofu, nke, dị ka ọ dị na mbụ, na-akwụsịlata ngwa ngwa kọmputa ahụ.
Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ezubere Instagram ka anyị jiri ya na ekwentị anyị, ọ bụghị mgbe niile ka anyị nwere onyonyo niile anyị ga-achọ itinye na netwọkụ mmekọrịta nke foto. N'ihi ARC Welder ndọtị anyị nwere ike jiri ngwa emere maka gam akporo na ihe nchọgharị Chrome anyị. Yabụ nke mbụ, ka anyị budata ngwa ngwa Instagram na mgbe e mesịrị anyị ga-aga n'ihu wụnye ARC Welder ndọtị.
Nke mbụ, ozugbo anyị na-agba ọsọ ARC Welder, anyị ga-ezipụta nha nke anyị chọrọ iji gosipụta ngwa ahụ. Dị ka o kwesịrị, ịbụ ngwa foto iji họrọ eserese iji hụ ngwa ahụ n'ụzọ ziri ezi na eserese. Banyere nhọrọ ndị ọzọ, ọ kacha mma ịhapụ ha ka ha dị, ebe ọ bụ na ha anaghị emetụta ọrụ nke otu, yabụ anyị na-aga na Launch APP bọtịnụ.
Ọzọ, a ga-egosipụta ngwa Instagram na ihe nchọgharị anyị ma ọ bụrụ na ọ bụ mbadamba. Dị ka ọ bụ ihe nomi na adịghị na ngwaọrụ gam akporo, ọ bụrụ na anyị pịa igwefoto, ọrụ ahụ agaghị azaghachi, n'ezie. Anyị agaghị enwe ike iji igwefoto laptọọpụ anyị were bipụtakwa ha na Instagram.
Banyere ọrụ nke ngwa ahụ, ọ bụrụ na ị bụworị onye ọrụ ya, ị ga-ahụ na ọ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ ngwa nke ekwentị mkpanaaka. Iji tinye foto ọhụrụ anyị na-enweghị na ngwaọrụ anyị, isi ihe kpatara nomi a, anyị ga-aga na Gallery ma họrọ Ndị ọzọ. Na windo mmapụta nke gosipụtara nhọrọ Osisi Osisi na Open File, anyị ga-pịa nke abụọ iji mepee ihe nyocha faịlụ ma gbakwunye foto anyị chọrọ ịkekọrịta na Instagram.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi bulite foto na Instagram na Chrome
ndewo, aha m bu nayeli
Ndị a bụ egwuregwu 7 kachasị mma ị nwere ike ịnụ ụtọ na ama gị